Kutheni iTekhnoloji isiba yinto ebalulekileyo kwimpumelelo yokutyela | Martech Zone
Kutheni iTekhnoloji isiba yinto ebalulekileyo kwimpumelelo yokutyela
NgoLwesibini, Septemba 29, 2015 NgeCawa, ngoSeptemba 27, 2015 Douglas Karr
Sine-podcast emangalisayo eya kupapashwa kungekudala kunye no-Shel Israel malunga nencwadi yakhe, Isisa sokuBulala. Esinye sezihloko endibethileyo ngaphakathi kwincoko kukuba zingaphi iitekhnoloji eziye zaphunyezwa ukwandisa imveliso kunye nokuchaneka okujikeleze abathengi eneneni beka ulawulo lwentengiselwano ezandleni zomthengi.
Mhlawumbi akukho mngeni mkhulu kunokuqhuba indawo yokutyela ephumeleleyo kule mihla. Phakathi kweendleko zamandla, ingeniso yabasebenzi, imimiselo, kunye nesigidi sezinye izinto ezinokucela umngeni kwivenkile yokutyela-ngoku sinike amandla kubo bonke abaxhasi ukuba baphonononge indawo yokutyela kwi-intanethi. Anditsho ukuba ayonto imbi- kodwa amava erestyu akukho nto imfutshane kummangaliso wokwenza mnandi ngokupheleleyo. Ukuba yindawo yokutyela enkulu, abantu bayakhalaza malunga nokulinda kunye nenkonzo. Ukuba sisidlo esimangalisayo, mhlawumbi kuthathe ixesha elide ukuya etafileni yakho. Ukuba ubusuku obuxakeke ngokungaqhelekanga, abasebenzi banokuba mfutshane kwaye bangakhathali.
apho Itekhnoloji inceda abathengisi bezolimo kukuxhobisa abathengi ukuba babenolawulo. Nazi iitekhnoloji ezili-9 ezahlukeneyo ezingancedi nje- kodwa ziya zibalulekile kumava okutyela:
Imidiya yokuncokola -Kodwa kunokuba ulinde ukukrazulwa kwiYelp, ukubonelela ngemithombo yeendaba apho unokuvula khona incoko kunye nabathengi kwaye ubagcine bebuya lishishini elihle.
website - yongeza imenyu yakho, imephu enezikhombisi, iiyure, inombolo yefowuni… okanye ividiyo ebukhoma kwi-intanethi ukuze abathengi bakwazi ukufumana lonke uncedo abaludingayo.
Ukuphonononga iiSayithi -Igcina idatha yakho intsha kwaye uphendule ingxelo kwiziza zokuphononongwa.
Blog - uninzi lwee-restaurateurs zikhulu ekuhlaleni, zinceda ukuxhasa ngemali okanye ukulungiselela ukuphuma. Yazisa abantu ngokulungileyo okwenzayo ngebhlog!
I-Wi-fi -Bavuyise ulutsha kwaye banciphise okubonakala ngathi kukulinda ixesha elide ngokuvumela abathengi ukuba bangene kwi-Intanethi. Ezinye iinkqubo zikuvumela ukuba ufake idatha yobhaliso kwabo basebenzisa i-wi-fi yakho ukuze ubenako ukubafumana kuluhlu lwakho lwe-imeyile.
UkuBeka kwi-Intanethi -Uhlala uvela kwaye igama lakho alikho kuluhlu lokubhukisha? Yongeza ukubhukisha kwi-Intanethi ukuze abantu baqiniseke ukuba bakwinkqubo kwaye bayazi ukuba mababonise nini.
Uku-odola okuselfowuni - inkqubela phambili kwitekhnoloji yenza ukuba kube nakho ukuhanjiswa kwe-Intanethi, ukukhutshwa, kunye noku-odola kwetafile ukuba kuthathwe kwizixhobo eziphathwayo. Imiyalelo eyenziwe ngumthengi ihlala ichanekile!
Iikhuphoni zedijithali -I-SMS kunye nemiyalezo ebhaliweyo, amakhuphoni e-imeyile kunye neenkqubo zokunyaniseka zigcina abathengi bebuya.
Ukuzihlola - akusekho ukulinda itsheki. Ukubeka ithebhulethi ngeerisithi ezithunyelwe nge-imeyile makwenziwe ngabantu bahlawule kwaye bashiye umva kunye nabasebenzi bakho.
Abaxhasi berestyu bathanda itekhnoloji kuba bayilinganisa nenkonzo ekhawulezileyo kwaye, ekugqibeleni, amava angcono okutya. Bakhangela indawo yakho, nokuba awunayo i-wi-fi, ubhukisho kunye noku-odola okuhambayo. Bafunda uphononongo kwaye bajonge amajelo eendaba ezentlalo. Ngaba uyabaphumelela ngetekhnoloji okanye uphulukene nabo ukhuphisana nabo?
tags: amatikiti edijithaliuku-odola ngeselulaiiapps zokutyelaiibhlog zokutyelayokutyela mobile uku-odolayokutyela kwi-intanethiuphononongo lwerestyuindawo yokutyela imithombo yeendabaitekhnoloji yokutyelaIndawo yokutyelaIndawo yokutyela wi-fiamatikiti esmsukuphuma kwetafileukugcinwa kwetafile
Siphinda siwubeke ngokutsha uMxholo ngempumelelo
Izibonelelo zokusebenzisa iNqaku leThebhulethi yeeNkqubo zokuThengisa eziVenkile
Oktobha 6, 2015 ngo-1: 52 PM
I-infographic enkulu. Ndisebenza ne-REVTECH Accelerator eDallas egxile ekuziseni izinto ezintsha kwintengiso ye-Restaurant, Retail & Hospitality. Sibona ithuba elingummangaliso ngokuqalisa kugxile ekukhuleni kokunxibelelana kwabathengi. Amaxesha achulumancisayo. Enkosi ngenqaku lakho.
Oktobha 6, 2015 ngo-11: 24 PM
Enkosi ngokuthatha ixesha lokufikelela! Kungenxa yoko le nto bebesenza lo msebenzi!
Nov 28, 2015 kwi-1: 30 AM
Senza ii -apps zeselfowuni kwizixeko eziphumelelayo zesizwe- iMiami, kwaye abanini berestyu bajolise ngokupheleleyo kwintengiso yangaphakathi nohlelo nabathengisi abanjengo-Eat24 kunye nooPostmate. Abanye babanini nangona kunjalo bakhetha ukwakha iiapps zabo, njengoko oko kugcina imali kwi-% ikhomishini ekuhambeni kwexesha.